Ngaba ukhona umntu obuza i-Ask.com? | Martech Zone
NgoLwesine, Aprili 26, 2007 NgoLwesibini, Novemba 5, 2019 Douglas Karr
Usenokuba uqaphele kwelinye lamakhonkco amva nje ukuba Ask.com kwaye Live ndingene kwi Iiphathi umgangatho. Ixesha lesemap liyazichaza-yindlela yokukhangela iinjini ukwenza imephu iwebhusayithi yakho ngokulula. I-Sitemaps zakhiwe ngaphakathi XML ukuze zigqitywe ngokulula ngenkqubo. Ndine Iphepha lesimbo elisetyenzisiweyo kwimephu yam yekhaya ukuze ubone ukuba loluphi ulwazi oluqulathiweyo.
Ibalaphu kunye neWordPress
kunye WordPress, kulula ukuzenzekelayo kunye nokwakha iimephu zakho. Faka nje ifayile ye- Iplagi yeGoogle yemephu yesayithi. Ndiqhuba inguqulelo ye-3.0b6 ye-plugin kwaye intle. Kutshanje nditshintshe iplagi kwaye ndongeza inkxaso ye-Ask.com yokungenisa. Ndilungenisile utshintsho lwam kumphuhlisi kwaye ndiyathemba ukuba uyabongeza kwaye ukhupha ingxelo elandelayo.
Ukuhambisa imephu yakho yesayithi kwi-Ask.com
Ungangenisa imephu yakho yesayithi ku-Ask.com ngesandla ngesixhobo sokungenisa indawo:
Ndonwabile ukubona le nto kwaye kwangoko ndangenisa indawo yam kwaye ndaqala ukusebenza kulungiso lweplagi. Ndiyazi ukuba iAsk.com isandula ukugqithisa iphepha labo lasekhaya kwaye yafumana amaphepha-ndaba ndaye ndacinga ukuba izakukhokelela kutrafikhi eyongezelelweyo.
Ngaphezulu kwe-50% yotyelelo lwam lwemihla ngemihla luvela Uphando kodwa okwangoku andisayi kubona ndwendwe lunye ukusuka Ask.com! Ndibona inkohliso ye Yahoo! iindwendwe kunye nabambalwa Live iindwendwe… kodwa akukho zindwendwe zeAsk.com. Ekujongeni ezinye zeziphumo zophando zeAsk.com, uninzi lwazo lukhangeleka lukhulile…… Mhlawumbi esi sesona sizathu siphambili sokuba i-Ask.com ingafumani nasiphi na isithuthi? Ngaba ukhona kuni osebenzisa iAsk.com?
Iingcebiso ezi-5 ezingaqhelekanga zokuPhinda kabini ukuvelisa kwakho
Epreli 26, 2007 ngo-11: 20 PM
Amaxesha ambalwa okugqibela ndizamile ukubuza.com, khange ndivelise iziphumo ezilungileyo kakhulu. Uninzi lwalamakhonkco awabonisileyo ayengekho ngaphezulu okanye indala nje. Bendingazi ukuba umntu usebenzisa nantoni na KODWA uGoogle kwakhona. Ubuncinci zikhomba rhoqo.
Wow, ubeko oluhle lweTechnorati. Ezo zinzima ukuza nazo.
Epreli 27, 2007 ngo-6: 49 AM
I-tie yokugqibela endizame ukuyibuza ibikokokuqala ndibona ezo ntengiso zazo zenkawu. Ndifumene ke ukuba iziphumo abazibuyayo azilunganga. Into enomdla kukuba, iTechnorati ayithathi njengophando lwenqanaba eliphezulu nokuba. Unokukhangela i-domain yakho kwi-Ask, uze u-ping Technorati kunye ne-URL yeziphumo. Ayizukukuqhushumba uye kwi-100 ephezulu, kodwa yona yasimahla iTekhorati backlink!
Epreli 27, 2007 ngo-3: 31 PM
Ndifumana ii-5 ukuya kwi-10 hits ukusuka Ask.com yonke imihla (kwibhlog yam yakudala)… kwaye konke kwinqaku elifanayo… ..
Masibone ukuba le nto yemephu iyiphucula njani imeko yethu?
Epreli 27, 2007 ngo-6: 35 PM
Ndicinga ukuba ukugcwala kwabantu kwiibhloko zam kuGoogle kukudilika komhlaba, i-yahoo kunye nokukhangela ngokuhlala kude kakhulu, kwaye iBuza ayikho ndawo.
Nov 29, 2007 kwi-9: 54 AM
Kulungile ndifumene le bhlog ngoku… kodwa izinto ezintle!
Mar 6, 2008 ngo 10:47 PM
Ndiyazi ukuba eli linqaku elidala, kodwa bendifuna nje ukukwazisa ukuba ndikufumene nge Ask.com! Kuyahlekisa, akunjalo?
Ndisebenzisa Ask.com xa ndikhangela into ethe ngqo. Ngesizathu esithile bahlala bendikhomba kwicala elifanelekileyo.
Mar 7, 2008 ngo-10: 36 AM
Kuyamangalisa ukuva! Ndiyifunde nje Buza Ubeka abanye abantu kwaye bacinga ukusebenzisa uGoogle- kodwa ingxelo kukuba injini yabo ilungile kakhulu kwimibuzo ethile. Khange ndiyisebenzise kakhulu, kodwa ndivile izinto ezintle kwi-logic kunye ne-algorithms esekwe kuyo yinjinjini.